सोनी ब्राभिया बग र पूर्वाग्रह लाइट अन र अनियमित जस्तो देखिन्छ - मिडियालाइट बायस प्रकाश
सोनी ब्राभिया बग र पूर्वाग्रह लाइटहरू अन टिभी बन्द हुँदा अनियमित रूपमा देखिन्छ।
तपाईंले यो पृष्ठ फेला पार्नुभयो किनकि तपाईंको सोनी ब्राभिया बन्द हुँदा तपाईंको पूर्वाग्रह बत्तीहरू अन गरिरहन्छ।
शुभ समाचार यो हो कि तपाईंको पूर्वाग्रह बत्तीमा केही गडबडी छैन।
खराब समाचार यो हो कि त्यहाँ टिभीको साथ ज्ञात मुद्दा छ जुन छैन (र सम्भवतः समाधान हुँदैन) सोनी द्वारा समाधान (GitHub मा लिंक)।
हामी एक चकित ग्राहक जोश जेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं, जसले आफ्नो एम्प्लीफायर क्लिक गर्ने कारण समस्या भोग्दै थिए जब ब्राविया स्ट्यान्डबाई बगको कारणले ब्राभिया अन र अफ गर्‍यो। अनलाइन फोरमको समीक्षाले उनलाई एक फिक्समा पुर्‍यायो जुन संयोगवश ब्राविया स्ट्यान्डबाइ बगलाई पूर्वाग्रह रोशिनका लागि आंशिक रूपमा समाधान गर्दछ। यो छोटो पृष्ठ पढ्नुहोस् बगलाई बुझ्नुहोस् र फिक्सले के गर्दछ पत्ता लगाउनुहोस्।
तपाईंले सायद यो पृष्ठ फेला पार्नुभयो किनभने जब तपाईं सोनी ब्राभियामा युएसबी पोर्टबाट मिडियालाइट उर्जा गर्नुहुन्छ, टिभी बन्द हुँदा बत्ती अनियमित समयमा बन्द र बन्द हुँदैछ। यो कष्टकर छ!
"के अन्य ब्रान्डको बत्तीहरू टिभीको साथ बन्द हुँदैन?"
होइन। अन्य ब्राण्डका प्रकाशहरू बन्द हुन्छ केवल जब तिनीहरू अनप्लग हुन्छन् वा शक्ति गुमाउँछन्। त्यो तपाईले अपेक्षा गर्नुभयो। यदि तपाइँ बत्ती जलाउनुहुन्छ, यो बन्द हुन्छ। यसलाई प्लग इन गर्नुहोस् र यो फर्कन्छ। बत्तीले केही गरिरहेको छैन। यो भर्खरै बत्तीरहेको छ जब शक्ति पुनर्स्थापित हुन्छ।
प्रत्येक सोनी ब्राभिया टिभीले यो गर्छ।
यो एक कारण यो छ किन हामी प्रत्येक मिडियालाइट Mk2 फ्लेक्सको साथ रिमोट कन्ट्रोल समावेश गर्दछौं। मिडियालाइट पहिले नै धेरै स्मार्ट हबहरू र रिमोटहरूमा प्रोग्राम गरिएको छ जसमा लोगिटेक हार्मोनी इकोसिस्टम शामिल छ।
१) बाहिरी शक्ति को उपयोग र तपाइँको स्मार्ट रिमोट वा हब मा हाम्रो रिमोट कार्यक्रम।
२) वा TV बाट तपाइँको MediaLight शक्ति, "धारावाहिक," RS2C नियन्त्रण मोड परिवर्तन र MediaLight रिमोट वा एक स्मार्ट हब वा सार्वभौमिक रिमोट संग रोशनी बन्द गर्नुहोस्.
यहाँ निर्देशनहरू छन् तपाईको RS232C पोर्ट मोडलाई सिरियलमा परिवर्तन गर्नका लागि। एक पटक पूर्ण भएपछि, टिभी स्वचालित रूपमा फेरि सुरु हुन्छ।
सबै दृश्यमान अनुप्रयोगहरूका साथ गुगल मेनूमा जानुहोस्। तपाईको ब्राभिया रिमोटमा "गृह" बटनमा क्लिक गरेर तपाईं त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनको माथिल्लो दाहिने तर्फ "सेटिंग्स" विकल्प चयन गर्नुहोस् (यो मेनु भविष्यको एन्ड्रोइड टिभी अद्यावधिकहरूको साथ परिवर्तन हुन सक्छ)
"नेटवर्क र एसेसरिज" सेटिंग्सको सेक्सनमा तल स्क्रोल गर्नुहोस् र तपाईले "RS232C नियन्त्रण" भन्ने वस्तु देख्नुहुनेछ। यसलाई चयन गर्नुहोस्।
RS232C नियन्त्रण सेक्सन अन्तर्गत, "Via धारावाहिक पोर्ट" चयन गर्नुहोस्।
तपाइँको टिभी यो पुनः छान्नु भएपछि रिस्टार्ट हुनेछ, र एकचोटि तपाईले यो गरेपछि, टिभी बन्द हुँदा बत्तीहरू बन्द रहनेछ। अब तपाईं भरपर्दो रूपमा स्मार्ट हब, युनिभर्सल रिमोट, वा हामीले तपाईंको मिडियालाइट बायस प्रकाश प्रणालीको साथ समावेश गरेको रिमोट कन्ट्रोलको साथ बत्तीहरू बन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
कृपया नोट गर्नुहोस्: एन्ड्रोइड टिभीहरूले कहिलेकाँही पृष्ठभूमिमा कार्य गर्दछ, जस्तै फर्मवेयर डाउनलोडहरू र रिबुटहरू, र यो सम्भव छ कि बत्तीहरू अझै पनि दुर्लभ अवसरहरूमा बन्द गर्न सक्दछ, तर तिनीहरू अविरल रूपमा खोल्नेछ र बन्द हुनेछैन, यस डिम्मरको कारण छैन। झिम्काउनुहोस् र सँधै रिमोट आदेशहरूमा उत्तरदायी हुनेछ।
त्यसो भए, यसको मतलब यो हो कि यदि तपाईं पूर्वाग्रह प्रकाशको मालिक हुनुहुन्छ भने रिमोट समावेश गर्दछ त्यहाँ ब्राभिया स्ट्यान्डबाइ बगको लागि अब कार्यक्षेत्र छ। 👍